यी रासिक केसहरूमा तपाईंको रास्पबेरी पाई पोशाक लगाउनुहोस् नि: शुल्क हार्डवेयर
यी रासिक केसहरूको साथ तपाईंको रास्पबेरी पाई लुगा
थ्रीडी प्रिन्टिंग हाम्रो डेस्कको नजीक आइरहेको छ। यसले हामीलाई अधिक अनुकूलनयोग्य र मूल ग्याजेटहरू र सामानहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन थोरै प्रयोगकर्ताहरूसँग छन् वा जुन इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा फेला पार्न सकिँदैन। यहाँ हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं हाम्रो रास्पबेरी पाईको लागि केस वा कभरहरूको सूची जुन हामी थ्रीडी प्रिन्टरको साथ प्रिन्ट गर्न सक्छौं र आधिकारिक रास्पबेरी पाई बोर्डहरूको साथ प्रयोग गर्नुहोस्, दुबै यसको सब भन्दा पूर्ण संस्करणमा र यसको कम संस्करणमा। यसको लागि हामीलाई केवल प्रिन्टि file फाइल, रंगीन सामग्री र थ्रीडी प्रिन्टर चाहिन्छ।
2 एप्पल पाई
3 खेल कन्सोलहरू
4 न्यूनतम घन
डाक्टर को प्रशंसकहरु जो अझै धेरै छन्। र ती मध्ये एक सिर्जना गरिएको छ एक TARDIS आकार को केस जुन हामी प्रिन्ट गर्न र हाम्रो रास्पबेरी पाईको साथ प्रयोग गर्न सक्दछौं। केस पूर्ण रूपमा कार्यशील छ, जुन हामी कुनै पनि केबल वा उपकरणलाई रास्पबेरी पाईमा जडान गर्न सक्दछौं केस केस बिच्छेदन नगरी। यस लिंकमा प्रिन्ट फाईल फेला पार्न सकिन्छ।
यद्यपि ग्रीष्म cतुमा केकहरू कम रमाइलो हुन्छन्, रास्पबेरी पाईको लागि यो हुन सक्दैन। छ स्याउ पाई खोल यो एक मीठो दाँतको साथ प्रयोगकर्ताको लागि र पेस्ट्री पसलमा मिनी कम्प्युटरको रूपमा रास्पबेरी बोर्ड प्रयोग गर्नका लागि ठूलो केस हो। दुर्भाग्यवस, जब एक र inमा मुद्रण गर्दा, यो पेस्टलले थोरै वास्तविक अर्थमा बनाउँदछ, तर केवल रमाईलोको रूपमा। तपाईं यहाँ प्रिन्ट फाईल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क.
निन्टेन्डो NES सबैभन्दा व्यापक रूपमा पुनउत्पादित मामला हो तर अन्य पुनरुत्पादित गर्न सकिन्छ: निन्टेन्डो, 64, प्लेस्टेशन, सेगा मेगाड्राइभ, अतारी, आदि ... त्यहाँ धेरै खेल कन्सोलहरू छन् जसका प्रिन्ट फाइलहरूबाट तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो लिङ्क.
यो केस धेरै आधारभूत तर पनि धेरै लोकप्रिय छ। सेतो वा कालो जस्तो रंगको साथ घन आकार मात्र होईन एक महान सजावटी वस्तु तर यसले एक मिडियासेन्टरको रूपमा रास्पबेरी पाई बनाउन सक्दछ सलुनको लागि। यस घन को प्रिन्ट फाईल मा पाउन सकिन्छ यो लिङ्क.
यी क्यासिंगका केहि मोडेलहरू हुन् जुन हामी अनलाइन फेला पार्न सक्छौं, तर त्यहाँ छन् र हामी पनि 3D प्रिन्टिंग रिपोजिटरीहरू मार्फत अन्य प्रकारका हौसिंगहरू फेला पार्न सक्छौं। र यदि तपाईंसँग थ्रीडी प्रिन्टरमा पहुँच छैन भने त्यहाँ सँधै आधिकारिक केस किन्ने विकल्प हुन्छ, यद्यपि यो समान छैन। तिमीलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » रास्पबेरी Pi » यी रासिक केसहरूको साथ तपाईंको रास्पबेरी पाई लुगा
Match.com थ्रीडीले प्रिन्ट गर्दछ तपाईको सम्भावित साझेदारहरू यसको नवीनतम अभियानमा
चीनले यसको अनौठो कामिकजे ड्रोन देखाउँदछ